I-China i-SMD ekhusela amandla abavelisi be-inductor kunye nabathengisi | MingDa
Iphedi kwi-chip amandla inductor; ibizwa ngokuba yi-BASE kwimathiriyeli ebumba i-inductor; iphedi ngokubanzi ligama elisetyenziswa ziinjineli; igama eliqulethwe kwimathiriyeli kuthiwa yi-BASE; yenziwe ngokubanzi ngobhedu olunxitywe ngetini; Inecala elinye Iindlela ezimbini zokunyanga umphezulu wendlela ye-matte tin kunye ne-matte tin esecaleni; ukuba unyango lomphezulu wephedi alunacaciso laneleyo, umphezulu wobhedu uya kubonakala; Nje ukuba iphedi ivezwe kwi-electrode yobhedu, kunzima kakhulu kwi-tin; Kwangelo xesha, ukuqhuba akuhambi kakuhle; Kulula ukubangela ukuwelda okungamanga kwibhodi yomatshini uphela; Ngeli xesha, i-SMD yamandla inductor ayidlali indima yokunyanzeliswa; kananjalo ayidlali indima yokukrwitshwa; Kulula ukubangela isekethe yomatshini wonke ukuba isekethe emfutshane xa ikhoyo ngoku iphezulu kakhulu; Kwiimeko ezinzima, isiphaluka sitshisiwe; Ke ngoko, uburhabaxa benkqubo yephedi imisela ngokuthe ngqo ukusebenza kwemveliso.
I-Mingda Precision Electronics ijolise kuyilo, uphuhliso kunye nokuthengiswa kwezinto eziphezulu zokufaka amandla ombane, ii-inductors ezihamba rhoqo, ii-ferrite inductors kunye nezixhobo ezinxulumene nokhuseleko, kwaye zibonelela ngeenkonzo zobuchwephesha kunye nezisombululo zobungcali.
1. Eyona ndawo iphakamileyo inokugcwalisa ngoku isekwe kwi-ferrite
2. Ilungele ukutshintsha amaza ukuya kuthi ga kwi-10 MHz
3. Ultra ephantsi RDC kunye no-RAC
4. Yakha ukuthotyelwa kweRoHS kwaye ukhokele simahla
5. Ukugcwalisa okuphezulu kwezinto eziphambili kunye nobukhulu obuncinci
6. Uyilo oluqhelekileyo ngokwesicelo
7. Ichaphaza elisezantsi libonisa ngaphezulu kwento engundoqo ukwenzela ukwahlula ukungalingani.
8.Ipakishwe ngetape kunye nokupakisha kwe reel.
Idramu yethu kunye namandla ombane akhuselwe ngemagnethi kulungelelwaniso oluphezulu, olungenaxabiso eliphantsi. Ulwakhiwo olungundoqo lwe-Ferrite luvelisa i-flat L vs I kunye nelahleko ephantsi yokusebenza okuphezulu. Ukuvunywa okungafaniyo kunokuvulelwa isicelo sakho.
Ubukhulu kunye nobukhulu:
Uvavanyo lwe conditiou
I-CH2816 + WR7210
1. Tshintsha imowudi yokuhambisa umbane
Isiguquli se-DC / DC esihlanganisiweyo
Ukukhanya kwe-3 drive
4. Izixhobo ze-OA, iTV, iNcwadana yokubhalela, izixhobo zonxibelelwano eziphathwayo, isiguquli seDC / DC
5. Ukubeka iliso, ikhamera ephathekayo.
Egqithileyo I-inductor yamandla e-SMT
Okulandelayo: I-inductor yamandla e-SMD
ISmd Power Inductor
High Wirewound Ngoku Yenza Good F umgangatho ...